तपाईंले आफ्नो नयाँ स्प्रे पेन्ट कारखानाको लागि के तयारी गर्नुपर्छ?
स्प्रे पेन्ट उत्पादन उद्योगमा प्रवेश गर्न चाहने धेरै ग्राहकहरू उत्पादन अघि के तयारीहरू गर्नुपर्छ भनेर जान्न चाहन्छन्। निम्न लेखले तपाईंलाई सामग्री, वातावरण र उपकरणका तीन पक्षहरूबाट विस्तृत रूपमा परिचय गराउनेछ। यदि तपाईं नौसिखिया हुनुहुन्छ भने, यो लेखले तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ। ...
कोडिङ मेसिन भनेको के हो? तपाईको फिलिंग प्याकिङ लाइनमा प्रिन्टर थप्नका लागि तपाईसँग कतिवटा विकल्पहरू छन्?
कोडर के हो? स्टिकर लेबलिङ मेसिनको उद्धरण प्राप्त गरेपछि धेरै ग्राहकहरूले यो प्रश्न सोधे। कोडर लेबलहरूको लागि सरल प्रिन्टर हो। यस लेखले तपाईंलाई उत्पादन लाइनमा धेरै मुख्यधारा प्रिन्टरहरूमा परिचय गराउनेछ। १, कोडर/कोडिङ मेसिन सबैभन्दा सरल कोडिङ मेसिन एक सह...
एसेप्टिक चिसो फिलिंग र तातो फिलिंग
एसेप्टिक चिसो फिलिंग भनेको के हो? परम्परागत तातो भरिने संग तुलना? १, एसेप्टिक फिलिंगको परिभाषा एसेप्टिक चिसो फिलिंगले चिसो (सामान्य तापक्रम) पेय पदार्थहरू एसेप्टिक अवस्थाहरूमा भरिनेलाई जनाउँदछ, जुन उच्च-तापमान तातो भरिने विधिसँग सापेक्ष हो जुन सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ।
मेसिनको सेवा जीवनलाई के असर गर्छ?
1. सबै भन्दा पहिले: मेसिनको गुणस्तर। विभिन्न निर्माताहरू र विभिन्न प्रकारका मेसिनहरूले विभिन्न ब्रान्ड र कन्फिगरेसनहरूको इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। मेसिन धेरै संयन्त्रहरू मिलेर बनेको छ, र प्रत्येक मेकानिजम विभिन्न सामानहरूसँग जोडिएको छ। जति उच्च...
कङ्गोली ग्राहकको फिलिंग मेसिनको लागि भ्रमण।
19-12-18 मा व्यवस्थापक द्वारा
नोभेम्बरमा दोस्रो चाइना इन्टरनेशनल इम्पोर्ट एक्स्पो, 2019 अफ्रिकी प्रतिनिधिमण्डल कङ्गो, दक्षिण अफ्रिकाबाट सांघाई आइपुगेको छ। मालिकहरूले उनीहरूले मागेका मेसिनहरू भ्रमण गरे र जाँच गरे, हाम्रो कारखाना उनीहरूको तालिकामा मुख्य भरिने मेसिन आपूर्तिकर्ता हो। हामी, Higee मेसिनरी, एक निर्माण आधारित आपूर्ति ...
फिलिंग उद्योगमा PLA र PET सामग्रीको बोतलको फाइदा र बेफाइदा के हो?
19-12-17 मा व्यवस्थापक द्वारा
फोहोर छुट्याउने, लागत र वातावरणीय संरक्षणको मुद्दामा आधारित, के PLA बोतल पेय पदार्थ उद्योगको मुख्य धारा हो? जुलाई 1, 2019 देखि, सांघाई, चीनले सबैभन्दा कडा रद्दीटोकरी अलग गर्ने कार्यान्वयन गरेको छ। सुरुमा, रद्दीटोकरीको छेउमा कोही थियो जसले मद्दत गर्यो र...
बोलेको र स्थिर स्थिति
19-12-16 मा व्यवस्थापक द्वारा
राउन्ड बोतल लेबलिङका लागि रोलर बेल्ट प्रकार र स्थिर-स्थिति प्रकार बीचको भिन्नता धेरैजसो समय, स्पोक र फिक्स्ड-पोजिसन यन्त्रको साथ राउन्ड बोतल लेबलिङ मेसिनबाट खरिदकर्ताहरू अलमलमा पर्छन्। तिनीहरू गोल बोतल लेबल गर्न सक्छन्। तिनीहरू के भिन्नताहरू छन्? हामी कसरी उपयुक्त मेसिन छनौट गर्न सक्छौं? हामी अन्तरक्रिया गरौं...
चिनिया मेसिनरी मेला मास्को 2018
19-12-14 मा व्यवस्थापक द्वारा
2017 चीन प्राविधिक उपकरण र कमोडिटी प्रदर्शनी
19-12-13 मा व्यवस्थापक द्वारा